Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo bogaadiyay in Ciidamada Dowlada Somalia tababar lagu siiyo dalka Gudihiisa |
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo bogaadiyay in Ciidamada Dowlada Somalia tababar lagu siiyo dalka Gudihiisa
Mudane Saacid ayaa ciidamada ku tababaranaya xeradaas wuxuu ugu deeqay geel si loogu qalol, isagoo sheegay in tababarka ay ciidamadu ku qaadanayaan dalka gudihiisa ay tahay mid aad u wanaagsan, intii tababar loogu qaadi lahaa dalka dibaddiisa.
“Tani waa tallaabo lagu dhiiir-galinayo ciidamada xoogga dalka ee tababarka ku qaadanaya gudaha dalka, maadaama tababarku uu yahay mid adag oo muddo dheer qaadanaya. Ciidammadan waxaa qaybtooda hore la filayaa in uu tababarku u soo xirmo bisha May ee soo socota,” ayaa lagu yiri war loogu talogalay saxafaadda oo kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
G/sare Faandhe Jaamac Kaarshe oo ah taliyaha dugsiga tababarka ee Jaziira ayaa ka mahadceliyay taakuleynta gaarka ah ee ka timid ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, wuxuuna xusay in ciidamadu ay u baahnaayeen in inta ay ku jiraan tababarka ay helaan taakuleyn toos ah oo madaxda sare ee Qaranka kaga timaadda.
Ciidamda ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa waxaa tababarka siinaya xubno Soomaali ah oo khibrad dheer u leh tababaridda ciidamada, iyadoo la siinayo casharo ku saabsan habka dagaalka, difaaca iyo wadaniyadda.
Tababarkan ayaa kii ah ugu horreeyay ee noociisaa oo ciidammo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya lagu siiyo dalka gudhiiisa tan iyo markii xukunka laga tuurtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sannadkii 1991. Waxaana ay ku tilmaaameenn madaxda dowladda horumar laga gaaray dhinaca tayeynta ciidanka xooga.